Qaraxyo lagu qabtay Muqdisho - Awdinle Online
Qaraxyo lagu qabtay Muqdisho
Afhayeenka ciidamada Booliska Soomaaliyeed, Sadiiq Yuusuf Cali oo u warramay warbaahinta ayaa sheegay in maanta ciidamada ammaanka ay ka hortageen qaraxyo la doonayey in laga fuliyo gudaha magaalada Muqdisho.
Sadiiq ayaa tilmaamay in ciidamada Booliska ay gacanta ku dhigeen labo nin oo watay walxaha qarxa, kuwaas oo uu tilmaamay in la doonayey in lagu dhibaateeyo shacabka.
Afhayeenka Booliska ciidamada Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in mid ka mid ah raggaasi lagu qabtay agagaarka isgoyska Ex-Koontarool Afgooye, isaga oo qarax ku dhajinaya gaari uu leeyahay mas’uul dowladeed, walow uusan shaacin magaca mas’uulkaasi.
Sidoo kale wuxuu shaaciyey in nin kale oo xirnaa jaakadda qaraxyada lagu qabtay dhinaca deegaanka Ceelasha Biyaha ee gobolka Shabeelaha Hoose, kadib howlgal ballaaran oo ay halkaasi ka sameeyeen ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Dhamme Sadiiq Yuusuf Cali oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in qaraxyadaasi la doonayey in lagu carqaladeeyo amniga Muqdisho, gaar ahaan banaan-baxyada maanta ka socda caasimada ee lagu taageerayo hadalkii madaxweyne Farmaajo.
Ugu dambeyn afhayeenka ayaa xusay in saacadaha soo socda ay ay soo bandhigi doonaan raggaasi oo uu tilmaamay in haatan ay ku socdaan baaritaano dheeraad ah.
Amniga Muqdisho ayaa muddooyinkan ahaa mid degan, marka loo eego qaraxyadii horey uga dhici jiray caasimada, inkastoo ay weli ka dhacaan falal u badan dilal qorsheysan.
Previous articleDeegaano lagala wareegey Al-Shabaab
Next articleCumar (Filish) ” Xuquuqda Gobolka Banaadir rabshad in lagu raadiyo Ma aqbaleyno”
Faah faahin: Amiirkii dalka Kuwait oo geeriyooday
War deg deg ah:- Boqorka Dalka Kuwait oo Geeriyooday
Maxay ka wada hadleen Wasiir Beyle & Wakiilka QM?
Ra’iisul Wasaare Rooble oo Amar siiyay laamaha Amniga